*ပြုံး* မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » *ပြုံး* မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ	39
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 22, 2015 in Celebrity, Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette, Photography, Travel | 39 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က ပြုံးအန်တီတို့ မိသားစုလေးဆီ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားအောင် ပြုံးမျိုးဆက်- နောင်အခါ ဂဇက်မျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ့် ချာတိတ်ကလေး နှစ်ယောက်နဲ့ ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။
(ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ သမီးကြီးနဲ့ သားငယ်ပါ။ သူတို့နဲ့ အတူတွေ့ရတာကတော့…
အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူတဲ့ ကျနော်ပါ။)
ပြုံးမောင်မောင်နဲ့ ပြုံးမြင့်မိုရ်တို့ စားဖို့.. ပြီးတော့… ပြုံးအန်တီ ဝတ်ဖို့… ဂဇက်တီရှပ်
သင်္ကြန်ပြီးမှ ထွက်မယ့် ပြုံးအန်တီရဲ့ ‘မိဘမဲ့တိုင်းပြည်”စာအုပ် မူကြမ်း ၊ ကြိုဖတ်ရမှာ…
ပြုံးမြင့်မိုရ်တို့ မောင်နှမနဲ့ ကျနော်
မြစပဲရိုး says: အဲ့ အောင်ရဲလင်း ကို မတွေ့ဘူးလေတော့ ဆက်ဆက် ကို ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ရရင် အတော် ချော် မဲ့ (စောဒီး) အတော် ချော မဲ့ ပုံပါဘဲ။
မပြုံး စာအုပ်ခေါင်းစဉ် ကတော့ အတော်လေး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာ မို့ အရောင်းသွက် မယ် လို့ ကြိုပြီး မှန်းပါမယ်။
ပိုပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ ပြုံးရေ။
ဒီလို လူတစ်ယောက် ကိုရွာထဲ အမျိုးတော်ထားရတာ တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သမီးလေး ရော သားလေးပါ အတော်ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ဆက်ဆက် နဲ့ တွဲ လိုက်တော့ ကလေး တွေ ချစ်ဖို့ ကောင်းတာ ပိုပြီး ပေါ်လွင်သွားစေတယ်။ ဟိ။ jk သားလေး ကြည့်ရတာ ပုံမှန် သွက်သွက်လက်လက် ပုံစံ လေးပါ ပြုံး ရာ။
သိပ်ပြီး စိတ်မပူ ပါနဲ့။
ကြီးရင် သူများ ထက် ထူးချွန် တတ် တဲ့ ကလေး တစ်ချို့ က ငယ်တုန်း ဒီ လို နှေးတတ်ပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါ အမလတ်ရေ။ ကျမ ရွာထဲ မ၀င်နိုင်တာ တကယ်ကို မအားဘူးဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
Alinsett@Maung Thura says: အရီးရေ. . .
အဲ့အောင်ရဲလင်းဆိုတဲ့မင်းသားထက်တောင် ကျနော်က အောင်ရဲလင်းနဲ့ပိုတူတာပါဆို
သင်္ကြန်နားနီးရင် သဂျီးတို့ဆီ အောင်ရဲလင်းသွားမှာကို သဂျီးတို့က
အမိအရ အင်တာဗျူးးမယ်လို့
ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရပ်ကွက်က အဲ ဗျူးရတဲ့အကြောင်းရင်းခံထဲမှာ
အဲ့ဒီ အောင်ရဲလင်းဆိုတာက ကျနော်နဲ့အတော်တူနေလို့ ဆိုတာလည်း ပါတယ်ပေါ့
သင်္ကြန်အပြီးလောက်ဆို ဗျူးဖိုင် ကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါ့
http://www.azmtv.com မှာ. . .
မထွက်သေးတဲ့စာအုပ် ကြိုဖတ်ဖို့ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အစ်မပြုံး
ဒီစာအုပ်ကလည်း ခေါင်းစဉ်ကကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေလို့
နောက်ပြီး 1984 ကို သက်သေတည်ပြထားတဲ့စာအုပ်လေ
The Interview ရုပ်ရှင်နဲ့ 1984 ကို မီးမောင်းထိုးပြမယ့်စာအုပ်ထင်ရဲ့
.အိမ်ထဲ ပတ် ပြေးလွှားနေတဲ့ ကလေးတွေကို မနည်း ဆွဲခေါ် ငြိမ်အောင်
ပြီးတော့ အတွေးအခေါ်ကောင်းမယ့်ကလေးလို့ ခန့်မှန်းမိတယ်
အသားအရည်ကလည်း မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံး A4 လို ဖြူလွလွလေးတွေ
ချစ်စရာလေးတွေနော် . . .( ကျနော့်လိုပေါ့)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကိုမိုးမင်းသားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကား သေချာတောင် မပြောရသေးဘူး။ ကိုမိုးမင်းသားက လာတာ နှစ်ခါရှိပြီ။ မုန့်တွေ အများကြီးပါလာတယ်။ သူလာတဲ့အချိန် ကျမကလည်း အိပ်ရာထခါစ ထမင်းအိုးတောင် မတည်ရသေးဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်ခါ မှကို ထမင်းမကျွေးရသေးဘူး။ အားနာစရာကြီး ဟီး။ ကိုယ်က အရမ်းမိန်းမပီသတာဆိုတော့လေ ၊ စောစောထ အိမ်မှုကိစ္စလုပ် နေရတာနဲ့ မအားဘူး။
Crystalline says: က​လေး​လေး​တွေက ကပြားရုပ်​​လေး​တွေ… အ​မေလိုပဲထက်​မြက်​ကြမှာပါ… ဒညင်းဝက်​ကလည်း က​လေး​တွေနဲ့အပြိုင်​​ဖွေး​နေ​ရော… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ငင့်…ကင်မလာ မီးလင်းသွားလို့ နည်းနည်းဖွေးသွားတာပါခီညာ…
တကယ်တော့ အဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကြားမှာ ….
A4နှစ်ရွက်ကြားက ကတ္တရာပုံးလို ဖြစ်နေတာ..
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုရောက်သွားတာဒုံး ဒညင်းခွက်။ အားကျပါဘိ
Alinsett@Maung Thura says: ဟဲဟဲ ဟိုတနေ့က မိုးမင်းသားရဲ့ မုန့်တိုက်က မုန့်ပို့ကားနဲ့
အူးစည် says: အငယ်လေးက အမေ့ခြေရာနင်းပြီး
မိန်းမတော်တော်နဲ့ ရဦးမယ် မဟုတ်သေးဘူး ထင့်.. ဟီးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ငှယ်……
မိန်းမ တော်တော်နဲ့ မရသေးဘူးလို့ ဟောကိန်းထုတ်သွားတယ်..
.ဟောကိန်းထုတ်တဲ့သူရဲ့ စကားလေး မှန်ပါစေတော့ဆိုပြီး … မယူပဲ နေဦးမှပါပဲ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မြန်လိုက်တာ ဘယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသွားမှန်းတောင် မသိတာ။ အလက်ဇင်းတို့ ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ စိတ်ကူးချို ချို ကနေ တစ်အုပ်ထွက်တယ်။ နှစ်ဘ၀နှစ်ကန္တာ ပါ။ ထုတ်ဝေတိုက်က ဘယ်တော့ထွက်မလဲ ကြိုမပြောဘူး။ လုပ်ချထည့်လိုက်တာပဲ။ အလက်ဇင်းတို့ ပြန်သွားပြီးမှ ဖုန်းလာတယ်။ စာအုပ်ထွက်တယ်တဲ့။ ရှေ့လ ဧပြီမှာ လောကသစ်စာပေကနေ မိဘမဲ့တိုင်းပြည် ထွက်ဦးမှာ။ အကုန်ကပ် ကုန်တယ်။ နှစ်အုပ်စလုံးက အထူကြီးတွေ။ ဖတ်ရမယ့်လူတွေကို တောင် အားနာ တယ် ။ တကယ်ပြောတာ။
.စာအုပ်တွေ သွက်သွက်ထွက်သွားတော့ အစ်မလည်း အခု ဘ၀င်နည်းနည်းမြင့်နေတယ်။ ဘ၀င်မြင့်တာကလည်း ရောဂါတစ်ခုလိုပဲ၊ ကုရဦးမှာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အူးစည်
.ခန့်မှန်းတာ မှားသွားပြီနော်။ အကြီးမက မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတာ။ အခု ၂တန်းမှာ ၈တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်နိုင်ပြီ။ သင်္ချာ မှာ တော်တော်ညံ့တယ်။ အဲဒီမှာ ခေါင်းမပြေးဘူး။ အငယ်ကောင် မျောက်ကလေးကတော့ ဘယ်လိုလာဦးမလဲ မသိဘူး။
.ပြီးတော့ အလင်းဇက်ပြောတဲ့ နာမည်တွေ မှားတယ်။ နာမည်က ပြုံးမြင့်မောင် ပါ။ ပြုံးမောင်မောင် မဟုတ်ဘူး။ ပြုံးမြင့်မို ၊ ပြုံးမောင်မောင်၊ တကယ်လို့ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရမယ်ဆိုရင် ပြုံးမြန်မာ။ (မရနိုင်မှန်း သိသားပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ)
Alinsett@Maung Thura says: ငင့် .ပြုံးမောင်မောင်ပဲ ထင်နေတာ
.သေချာအောင် ထပ် မမေးသွားမိဘူး
naywoon ni says: က​လေး​တွေကြားထဲ ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့ နီ့မ​ကောင်းတဲ့ အကျင့်​​တွေ ခ​လေး​ဒွေကူးကုန်​မှဖြင့်​ဟယ်​ ။။။။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: အဟီးးး
အကျင့်တစ်ခု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သမီးလေးရော သားလေးပါ တကယ်ပဲ ချစ်စရာလေးတွေ။
ပြုံးမျိုးဆက်ကို ရွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဆက်ဆက်လည်း အများတကာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ အကျိုးကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာပါစေ။
ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကြိုက်လို့ ပြုံးရဲ့ စာအုပ်တွေကို နာမည်ကြားယုံနဲ့ ဖတ်ချင်မိတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း စာအုပ်ကအထူကြီးတွေဆိုလို့ လန့်ပြန်ရော။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: မကြာခင် ဂျူးမမ ကို ရွာထဲ ခေါ်မှာ
ဖုန်းကို ထားခဲ့ပြီး ခရီးထွက်တော်မူနေသတဲ့
Wow says: ကလေးတွေက နှစ်ယောက်လုံး တစ်ရုပ်ထဲနော်…. အဖေတူလား .. အမေတူလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: အသားဖြူတာတော့ သူတို့ အမေတော်နဲ့ တူတာ
Swal Taw Ywet says: အလင်းစက်စ် FB ပေါ်ကထက်ပိုပြူးနေသဗျ။
ရွာမျိုးဆက်တွေ မြင်ရတာ ဝမ်းသာသဗျို့။
ပြန်လာတော့မှ အကုန်ဝယ် ဖတ်ရတော့မယ်။
ပြောသာပြောရ လက်တော့လေးတောင် မဖွင့်နိုင်တဲ့ဘဝ။
ဖရီးဝိုင်ဖိုင်ကို ဖုန်းဖြင့် ၃ရွေ့ မန့်သည်။
Alinsett@Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့ ဦးစွယ်တော်
ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိ ပုံကို ပြန်ကြည့်တော့ ပြူးတူးပြဲတဲံ ဖြစ်လို့
Mike says: .ပြုံးမြင့်မောင်နဲ့ ပြုံးမြင့်မို တဲ့လား..နာမည်လေးတွေလှ…ကလေးတွေကတရုတ်ပုံပေါက်တယ်..ဖွေးလို့
.ရန်ကုန်က တိုက်ခန်းတွေကတော့ အသက်ရှုကျပ်သဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဦးကြီးမိုက်က အိမ်အကြောင်း ခဏခဏ ပြောတယ်နော်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား။ ဦးကြီးမိုက်ကိုယ်တိုင် နေအိမ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးနေပြီ။ နေအိမ်ပြောင်းရင် ပျဉ်ထောင်အိမ်တော့ စိတ်မကူးပါနဲ့။ လုံးဝမကောင်းဘူး။ အပူအအေး ဒဏ် ပြင်းထန်တယ်။ ခြကြောက်ရတယ်။ နယ်မှာကတော့ ငွေနည်းနည်းပါးပါးရှိရင် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နေလို့ရတယ်။ အိမ်ဈေးပေါတယ်။ ကျမတို့အိမ်လည်း အကျယ်ကြီးပဲ။ ခလေးတွေ သောင်းကျန်းလိုက်စမ်းဆိုတာ။ နယ်မှာက အဲလို သက်သာချောင်ချိလို့ နေဖြစ်နေတာပါ။ ရန်ကုန် မတက်နိုင်ဘူး။ ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်းလေး တစ်ခန်းတောင် မ၀ယ်နိုင်ဘူး။
Yae Myae Tha Ninn says: ဆက်ဆက် ညံ့တာလား… အကို ပဲ မတော်တာလား မသိ… အန်တီပြုံး ပုံပါမလာဘူး… မြင်ဖူးချင်ပါတယ်… ဖွဘုတ်လဲ မသုံးဘူး ကြားထားတော့ ဘီလို မြင်ရမည် မသိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: .ပြုံးအန်တီကို ပုံ မရိုက်ခဲ့ရဘူးဗျ…
သူ့ သားသားနဲ့ မီးမီးကိုတောင် သူမသိခင် ခိုးရိုက်ပြီး.. သူမသိခင် ရွာထဲ လာတင်တာ…
တင်ပြီးမှ သူ့ကို အသိပေးလိုက်တာ… အဟိ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကိုရေမြင်း
.အစိမ်းသဘက် မြင်ဖူးလား။ အဲဒါနဲ့ တထေရာတည်းပဲ။ တစ်ရွာလုံး လန့်ပြေးသွားမှာစိုးလို့။ ရုပ်မလှလို့ ဖွဘုတ် မသုံးတာပါ။ ရုပ်မလှဘူးဆိုတာထက် ရုပ်ကျတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်တယ်။ အရွယ်ကျတယ်ပေါ့။ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ရုပ်ပေါ့။
Kaung Kin Pyar says: ပုံတွေကြည့် စာတွေဖတ်ပြီး တွေးမိတာက….မိဘမဲ့တိုင်းပြည် နဲ့တင် တန်သွားပြီလို့…..
ကလေးလေးတွေကလဲ ချစ်စရာ…။ အောင်ရဲလင်းကိုကြည့်ပြီး သူ့စက်ဘီးလေး လုပြေးမှာစိုးလို့ထင့်…၊ အငယ်လေးခမျာ စက်ဘီးပေါ်ကတောင် မဆင်းရဲဘူး…။
Alinsett@Maung Thura says: အဲ့ စက်ဘီးလေး…သဘောကျနေတာ…
Kaung Kin Pyar says: ပြားသွားမှာပေါ့…. ပြား = စက်ဘီး…စက်ဘီးးး
pooch says: အော် ကလေးတွေများ ထွားတာမြန်လိုက်တာ မျက်စိတမှိတ်ပဲ ။
ဖြုဖြူချောချောလေးတွေ အိမ့်ဆည်းလည်း တခါတခါ ခေါင်းလောင်းကြီးလေးတွေ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်ပါတယ်မယ်ပုရေ။ အချိန်တွေကုန်တာ မြန်တယ်။ အားလုံး ဖျပ်ခနဲလိုပဲ။
Mr. MarGa says: ပြူးပြူးပြဲပြဲနဲ့ ဟယ်
Alinsett@Maung Thura says: aye so
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကောင်းကင်ပြာရေ ကောင်းကင်ကြီးက ဘာလို့ ပြာနေတာလဲ။
.သိကြားမင်းကြီးရေ ဘလက်ဟိုးဆိုတာ ငရဲပြည်လား။
kai says: A clear cloudless day-time sky is blue because molecules in the air scatter blue light from the sun more than they scatter red light. When we look towards the sun at sunset, we see red and orange colours because the blue light has been scattered out and away from the line of sight.
Black Holes – Odec
Although black holes haveastrong suction force, they may only suck up what … hole, an object onaradial path will haveavelocity approaching the speed.
ခင်ဇော် says: ဟာာ…
ဒါလေးး က ဟိုတခါ အမဝင့်ပြောတဲ့
အသားအရောင် လှလှ မောင်နှမ..!!
padonmar says: ပြုံးမမကိုမြင်ဖူးချင်ကြရင်ဘူဒင်ဘရွတ်ခ် ၀ယ်ဖတ်ပါ။
(စာအုပ်ကို ချောင်းကြည့်ပြီး ပြောပါတယ်)
ပြုံးသားလေးအကြောင်း ကေဇီ့ကို ရေးဖူးတယ်လေ။
အသားလေးက ဖြူနှစ်နှစ်လေး၊အကြောလေးတွေ စိမ်းလို့ဆိုတာ ။
ပုံပြလိုက်လို့ ရွာသူတွေ ၀ိုင်းလုကြတော့မှာပဲ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အစ်မပြုံးတို့အိမ်ကတော့ ကလေးတွေအကြိုက်တွေ့မယ့်ပုံပဲ။
Alinsett@Maung Thura says: အဲ့အိမ်မှာ အဲ့ကလေးတွေနဲ့
အတူ ပြေးလွှားဆော့လိုက်ချင်စိတ် မနည်းထိန်းခဲ့ရတာ
ကိုယ်က ဖွေးဖွေးကိုတောင် ကြိုက်နေပြီဆိုတော့လေ
ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတိပေးနေရတယ်
မင်းးးအဲ့ဒီ ပြုံးမြင့်မောင်လို မငယ်တော့ဘူးးးးလို့